सुशान्तका ३ कम्पनीमा प्रेमिकाको राज? एड्भाइजरले गरिन खुलासा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तका ३ कम्पनीमा प्रेमिकाको राज? एड्भाइजरले गरिन खुलासा
3,963 1 minute read
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपुत आत्मह’त्या प्र’करण झन् झन् उल्झिँदै गएको छ। पुलिसले गहिरिएर अ’नुसन्धान जारी राखेको छ। सुशान्तका नजिकका सबैसँग पुलिसले सोधपुछ गरिरहेको छ, ताकि उनीसँग जोडिएको कुनै पनि कुरा नछुटुन्।
सुशान्तले आत्मह’त्या गरेको केही दिनपछि उनीसँग सम्बन्धित कुराहरू थाहा पाउन पुलिसले उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीसँग लामो समयसम्म सोधपुछ गरेको थियो। सुशान्तले आत्मह’त्या गर्नुभन्दा एक दिन पहिलेसम्म रिया सुशान्तको साथमा नै थिइन् । रियालाई उनको घर पठाएको भोलिपल्ट नै सुशान्तले आत्मह’त्या गरेका थिए।
के रिहा चक्रावती र उनको भाइले सुशान्त सिंह राजपुतलाई पैसाको लागि युज नै गरेका हुन् त ? यो सवाल पनि उठिरहेको बेला मुम्बइ पुलिसले उनको नि’धनको बारेमा लिएर २७ जना भन्दा बढीको बयान लिइसकेको छ । सुशान्तले ३ ओटा कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
सन् २०१८ मा सुशान्तले भर्चुअल रियालिटी नामक कम्पनी खोलेका थिए। पछि रियाको आग्रहमा फ़ेरि उनले विविडरेज रियालिटिक्स नामक कम्पनी खोले। यसको नाम पनि रियाको नामबाट नै राखे। यस कम्पनीको डिरेक्टर रियालाई बनाए र रियाको अनुरोधमा रियाका भाइ सोविकलाई पनि डिरेक्टर बनाएको कुरा भारतीय संचारमाध्यम जनाएका छन् ।
उनको दुई ओटा कम्पनीको म्यानेजिङ् डाइरेक्टर रिहा रहेकी छिन् भने एउटाको म्यानेजिङ् डाइरेक्टर उनको भाइ स्वभिक चक्रावती रहेका छन् । यही कम्पनी घाटामा रहेको कारणले पनि सुशान्त तनावमा रहेको बताइएको छ ।
हैरान बनाइदिने कुरा त के छ भने, रियाका दिदीभाइ कम्पनीको डिरेक्टर हुँदा पनि यो कम्पनीमा उनीहरूको एक पैसा लगानी थिएन। सबै पैसा सुशान्तले नै लगानी गरेका थिए। केही दिन पहिले रियासँगको सोधपुछका क्रममा यो कम्पनीको कुरा उठाउनसम्म पनि रियाले आवश्यक ठानिनन्। पुलिसलाई यो कुराको सुँइकोसम्म पनि भएन।
अहिले आएर सुशान्तकी फाइनान्सियल एड्भाइजर प्रियंका खिमानीमार्फत पुलिसलाई यस कुराको जानकारी भएको हो। पुलिसले फ़ेरि पनि रियासँग कम्पनीको बारेमा सोधपुछ गर्ने बताइएको छ । जुन कुरा बान्द्रा पुलिस स्टेसनमा नौ घन्टाको सो’धपुछका क्रममा पनि रियाले बताएकी थिइनन्।
भारतीय मिडियामा आएको खबर अनुसार एउटा कम्पनी खोलेलगत्तै अर्को कम्पनी खोलेको कुराले सुशान्तको परिवार खुसी थिएन। रियाको भाइलाई किन कम्पनी डिरेक्टर बनाइयो भन्ने प्रश्न सुशान्तका परिवारको पनि थियो । यी सब कुराहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा कतै सुशान्तको हा’लतको जिम्मेवार रिया त होइनन् ? यो प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ ।
सोनुले गरे अर्को महान काम : सडकमा अलपत्र आमा र वच्चालाई दिने भए घर